ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page2of 15 - Padaethar
September 1, 2020 by Padaethar
ထီတိုက်ရိုက် live ကြည့်ရန်
ပြည်သူအပေါင်း စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တစ်လမှာ တစ်ခါသာကံစမ်းခွင့်ရကြတဲ့ ထီထွက်ရှိလာပါပြီနော်…
အားလုံးကံစမ်းထားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကို ဒီလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ဘယ်သူဆွတ်ခွတ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါပဲ။
ကျန်ဆုများကိုလည်း ဘယ်သူတွေကဆွတ်ခူးမလဲ မသိသေးပေမယ့် ခုဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ထီပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အားလုံးကျန်းမာပြီး ထီပေါက်ပြီး လှူနိုင်တန်းနိုင် စားနိုင်သောက်နိုင်ကြပါစေ….။Credit
ထီတိုကျရိုကျ live ကွညျ့ရနျ
ပွညျသူအပေါငျး စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ တဈလမှာ တဈခါသာကံစမျးခှငျ့ရကွတဲ့ ထီထှကျရှိလာပါပွီနျော
အားလုံးကံစမျးထားမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကို ဒီလို ကိုဗဈကာလမှာ ဘယျသူဆှတျခှတျမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစရာပါပဲ။
ကနျြဆုမြားကိုလညျး ဘယျသူတှကေဆှတျခူးမလဲ မသိသေးပမေယျ့ ခုဒီစာကို ဖတျနတေဲ့ ထီပေါကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
အားလုံးကနျြးမာပွီး ထီပေါကျပွီး လှူနိုငျတနျးနိုငျ စားနိုငျသောကျနိုငျကွပါစေ
August 31, 2020 by Padaethar
ရန်ကုန်လေဆိပ်လည်း ထိသွားပါပြီ ၊ ကွင်းဆက်ပျက်လူနာ (၇၄၁) သည် လေဆိပ်ဝန်ထမ်း…
August 30, 2020 by Padaethar
ရန်ကုန်လေဆိပ်လည်း ထိသွားပါပြီ ၊ ကွင်းဆက်ပျက်လူနာ (၇၄၁) သည် လေဆိပ်ဝန်ထမ်း..
ရန်ကုန်လေဆိပ်လည်း ထိသွားပါပြီ၊ ကွင်းဆက်ပျက်လူနာ ၇၄၁ သည် လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတဦး ဖြစ်ပြီး ဆက်စပ်သူ ၁၅ ဦးခန့်ကို ယနေ့ Q စင်တာပို့မည်
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ယနေ့သြဂုတ်လ ၃၀ရက် နံနက် ၈နာရီနာရီထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါဝင်လာသော မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အမှတ် ၇၄၁ မ ၂၆ နှစ်သည် လေဆိပ် လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး …
၎င်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်စပ်သူ ၁၅ဦးခန့်ကို ယနေ့တွင် ကွာရတင်းစင်တာသို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်လွင်က ပြောပါတယ်….
အဆိုပါ ကိုဗစ်လူနာသည် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ကျောက်ရေတွင်း ရပ်ကွက် ရွှေဘုန်းပွင့် ဘုရားအနီးတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ပြည်ပသို့ ခရီးသွားလာမှု ရာဇဝင်မရှိ ၊
ရောဂါပိုးရှိသူ နှင့် ဆက်စပ်မရှိဘဲ အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ စောင့်ကြည့်လူနာတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပါတယ်….သူက လေဆိပ်က လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်း။
၂၇ရက်နေ့က နည်းနည်းလေး ဖျားနေတာနဲ့ လေဆိပ်ဆေးခန်းကနေပြီးတော့ မသင်္ကာလို့ အင်းစိန် ဆေးရုံကို ပို့လိုက်တာ ။ ကိုဗစ် စစ်ဆေးတော့ ပိုးရှိတဲ့ အဖြေကို တွေ့တော့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကို ပို့မှာပါ။
သူ့အိမ်သားတွေ အကုန်လုံး ကွာရတင်းပို့ဖို့ လုပ်နေပြီး။ အဲ့နားကို လော့ဒေါင်း ချထားပါတယ်။ သူနဲ့ ဆက်စပ်သူက ၁၅ ဦးလောက် ရှိပါတယ် ဟု ဦးမြင့်လွင်က ပြောပါတယ်…။crd:#
ရနျကုနျလဆေိပျလညျး ထိသှားပါပွီ ၊ ကှငျးဆကျပကျြလူနာ (၇၄၁) သညျ လဆေိပျဝနျထမျး..
ရနျကုနျလဆေိပျလညျး ထိသှားပါပွီ၊ ကှငျးဆကျပကျြလူနာ ၇၄၁ သညျ လဆေိပျဝနျထမျးတဦး ဖွဈပွီး ဆကျစပျသူ ၁၅ ဦးခနျ့ကို ယနေ့ Q စငျတာပို့မညျ
ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ ယနသွေ့ဂုတျလ ၃၀ရကျ နံနကျ ၈နာရီနာရီထုတျပွနျခကျြတှငျ ပါဝငျလာသော မွောကျဥက်ကလာပ မွို့နယျမှ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ အမှတျ ၇၄၁ မ ၂၆ နှဈသညျ လဆေိပျ လုံခွုံရေးဝနျထမျးတဈဦးဖွဈပွီး …
၎င်းငျးနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျစပျသူ ၁၅ဦးခနျ့ကို ယနတှေ့ငျ ကှာရတငျးစငျတာသို့ ပို့ဆောငျရနျ စီစဉျနကွေောငျး တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမွငျ့လှငျက ပွောပါတယျ….
အဆိုပါ ကိုဗဈလူနာသညျ မွောကျဥက်ကလာပမွို့နယျ ၊ ကြောကျရတှေငျး ရပျကှကျ ရှဘေုနျးပှငျ့ ဘုရားအနီးတှငျ နထေိုငျသူဖွဈပွီး ၎င်းငျးသညျ ပွညျပသို့ ခရီးသှားလာမှု ရာဇဝငျမရှိ ၊
ရောဂါပိုးရှိသူ နှငျ့ ဆကျစပျမရှိဘဲ အငျးစိနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးမှ စောငျ့ကွညျ့လူနာတဈဦး ဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပါတယျ….သူက လဆေိပျက လုံခွုံရေး ဝနျထမျး။
၂၇ရကျနကေ့ နညျးနညျးလေး ဖြားနတောနဲ့ လဆေိပျဆေးခနျးကနပွေီးတော့ မသင်ျကာလို့ အငျးစိနျ ဆေးရုံကို ပို့လိုကျတာ ။ ကိုဗဈ စဈဆေးတော့ ပိုးရှိတဲ့ အဖွကေို တှတေ့ော့ ဝဘောဂီဆေးရုံကို ပို့မှာပါ။
သူ့အိမျသားတှေ အကုနျလုံး ကှာရတငျးပို့ဖို့ လုပျနပွေီး။ အဲ့နားကို လော့ဒေါငျး ခထြားပါတယျ။ သူနဲ့ ဆကျစပျသူက ၁၅ ဦးလောကျ ရှိပါတယျ ဟု ဦးမွငျ့လှငျက ပွောပါတယျ…။
(၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် –
– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL)မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၅၂၄) ခု၊
– ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဒုတိယအသုတ် ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၅၂) ခုနှင့်
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၄) ခု တို့အား ထပ်မံ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ –
• COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၁၆) ဦးတွေ့ရှိပါသည်။
၂။ (၃၀-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၈:၀၀) နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ (၇၄၉)ဦး ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
၃။ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့အတွက် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ အနေဖြင့် –
– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)(NHL) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁,၀၈၄) ခု၊
– ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၄၅) ခု၊
– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁၀) ခု၊
– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မော်လမြိုင်) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ စစ်တွေမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၀) ခု၊
– နေပြည်တော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခုနှင့်
– ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ်(၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊ စုစုပေါင်း (၂,၀၅၄) ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(၃၀-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နံနကျ (၈:၀၀)နာရီ
၁။ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရကျနအေ့တှကျ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲစဈဆေးရာတှငျ –
– အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(ရနျကုနျ) (NHL)မှ ဒုတိယအသုတျ ဓာတျခှဲ နမူနာ (၅၂၄) ခု၊
– ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဒုတိယအသုတျ ဓာတျခှဲနမူနာ (၅၂) ခုနှငျ့
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ ကြောကျဖွူမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၄) ခု တို့အား ထပျမံ စဈဆေးပွီးစီးခဲ့ရာ –
၃။ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရကျနအေ့တှကျ COVID-19 ရောဂါ ဓာတျခှဲစဈဆေးမှုမြား အနဖွေငျ့ –
– အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(ရနျကုနျ)(NHL) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁,၀၈၄) ခု၊
– ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန(DMR) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၄၅) ခု၊
– ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန(မန်တလေး) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၁၀) ခု၊
– ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (မျောလမွိုငျ) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၇၂) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ စဈတှမွေို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၀၀) ခု၊
– နပွေညျတျောပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁၀၀၀) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၃) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ ပုသိမျမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၁) ခုနှငျ့
– ရနျကုနျမွို့၊ အမှတျ(၁) တပျမတျောဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁၀၀၀) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊ စုစုပေါငျး (၂,၀၅၄) ခုအား စဈဆေးခဲ့ပါသညျ။
နေ့ခင်းကြောင်တောင် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးမှု
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်မြို့မှာ ညနေခင်းအချိန် သေနတ်အတုနဲ့ ရွှေဆိုင်အနုကြမ်းစီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားခံနှစ်ဦးကို ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေနဲ့ပြည်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာပဲ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၉ရက်၊ညနေ ၅နာရီခန့်က ပြည်မြို့၊ရွှေကူရပ်ကွက်၊ပန်းပဲတန်းလမ်းနဲ့ သံတစ်ချောင်းလမ်းထောင့်က မေ့သရဖူရွှေဆိုင်ကို သဲကုန်းအုပ်စု၊ ဆင်ပိုက်ရွာက၊ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ပြည့်ဖြိုးအောင်နဲ့ ထက်ဇော်အောင် ဆိုသူ နှစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး သေနတ်နဲ့ချိန်ကာ အရောင်းကောင်တာထဲက ရွှေလက်ဝတ်လက်စားတွေ လုယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကို ရပ်ကွက်နေလူထုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာ ချက်ခြင်းပဲဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမယောက်ျားကိုလည်း သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပြစ်တယ်။ ကျမတို့ကိုလည်းစပရေးနဲ့ဖျန်းတယ်လို့ အနုကြမ်းစီးခံရတဲ့ဆိုင်သူဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ တရားခံဖြစ်သူနှစ်ဦးကို ပြည်မြို့က အမှတ် (၁)ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားရှိပြီး အရေးယူမှုတွေ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။
ဝေဖုန်းစံ(ပြည်) #AlinnMyay(အလင်းမြေ) #ပြည်သူ့ကူညီရေး #ပြည်သူ့အသံဖော်ဆောင်ရေး #သတင်းမှန်မီဒီယာ
နခေ့ငျးကွောငျတောငျ သနေတျအတုနဲ့ ရှဆေိုငျအနုကွမျးစီးမှု
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ပွညျမွို့မှာ ညနခေငျးအခြိနျ သနေတျအတုနဲ့ ရှဆေိုငျအနုကွမျးစီးခဲ့တဲ့ဖွဈရပျတခုဖွဈပှားခဲ့ပွီး တရားခံနှဈဦးကို ရပျကှကျနပွေညျသူတှနေဲ့ပွညျမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့က ပူးပေါငျးဖမျးဆီးခဲ့ပွီး အခငျးဖွဈရာနရောမှာပဲ ဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ။
သွဂုတျလ ၂၉ရကျ၊ညနေ ၅နာရီခနျ့က ပွညျမွို့၊ရှကေူရပျကှကျ၊ပနျးပဲတနျးလမျးနဲ့ သံတဈခြောငျးလမျးထောငျ့က မသေ့ရဖူရှဆေိုငျကို သဲကုနျးအုပျစု၊ ဆငျပိုကျရှာက၊ ညီအဈကိုဝမျးကှဲတျောစပျသူ ပွညျ့ဖွိုးအောငျနဲ့ ထကျဇျောအောငျ ဆိုသူ နှဈဦးရောကျရှိလာပွီး သနေတျနဲ့ခြိနျကာ အရောငျးကောငျတာထဲက ရှလေကျဝတျလကျစားတှေ လုယူမှုဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ကို ရပျကှကျနလေူထုနဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ အခငျးဖွဈရာနရောမှာ ခကျြခွငျးပဲဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ကမြယောကျြားကိုလညျး သနေတျနဲ့ နှဈခကျြပွဈတယျ။ ကမြတို့ကိုလညျးစပရေးနဲ့ဖနျြးတယျလို့ အနုကွမျးစီးခံရတဲ့ဆိုငျသူဖွဈသူက ပွောပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ တရားခံဖွဈသူနှဈဦးကို ပွညျမွို့က အမှတျ (၁)ရဲစခနျးက အမှုဖှငျ့ထားရှိပွီး အရေးယူမှုတှေ ဆောငျရှကျသှားမှာပါ။
(၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
– အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ပထမအသုတ်) ဓာတ်ခွဲ နမူနာ (၅၆၀) ခု၊
– ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ မှ (ပထမအသုတ်) (၁၉၃) ခု၊
– ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (မန္တလေး) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁၀) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ကျောက်ဖြူမြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၄) ခု၊
– နေပြည်တော် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁၀၀၀)မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၃) ခု၊
– ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁) ခုနှင့်
– ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် (၁) တပ်မတော်ဆေးရုံကြီး ခုတင် (၁,၀၀၀) မှ ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊
– စုစုပေါင်း အား ယနေ့၊ ညနေတွင် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ –
• COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် (၇၇) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။
၂။ (၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၇၃၃) ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်း (old confirmed case) များ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှု တွင် (၂) ကြိမ်ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူအသစ် (၂) ဦး (Case – 380 နှင့် 381) ရှိသဖြင့် ….
ယနေ့အထိ ရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ စုစုပေါင်း (၃၅၁) ဦးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် (၃၄၇) ဦးအား ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ သတ်မှတ် နေရာများတွင် အသွားအလာဆက်လက်ကန့်သတ်၍ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါသည်။
၅။ (၂၈-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၈-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအတွင်း တွေ့ရှိရသော စောင့်ကြည့်လူနာအသစ် (၅၃) ဦးရှိပါသည်။
၆။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများပြီးစီးချိန်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ချိန်အကြား အချိန်တိုတောင်းခြင်း ကြောင့် ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြုစုလျက်ရှိပြီး ထပ်မံထုတ်ပြန် မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂၉-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ
– အမြိုးသားကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (ရနျကုနျ) (NHL) မှ (ပထမအသုတျ) ဓာတျခှဲ နမူနာ (၅၆၀) ခု၊
– ဆေးသုတသေနဦးစီးဌာန (DMR)မှ ဓာတျခှဲနမူနာ မှ (ပထမအသုတျ) (၁၉၃) ခု၊
– ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဓာတျခှဲမှုဆိုငျရာဌာန (မန်တလေး) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၁၁၀) ခု၊
– ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး၊ ကြောကျဖွူမွို့မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၄) ခု၊
– နပွေညျတျော ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁၀၀၀)မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၃) ခု၊
– ရနျကုနျမွို့၊ အမှတျ (၁) တပျမတျောဆေးရုံကွီး ခုတငျ (၁,၀၀၀) မှ ဓာတျခှဲနမူနာ (၂၀၁) ခု၊
– စုစုပေါငျး အား ယနေ့၊ ညနတှေငျ စဈဆေးပွီးစီးခဲ့ရာ –
၃။ ဓာတျခှဲအတညျပွု လူနာဟောငျး (old confirmed case) မြား၏ ဓာတျခှဲနမူနာစဈဆေးမှု တှငျ (၂) ကွိမျဆကျတိုကျ ပိုးမတှရှေိ့သူအသဈ (၂) ဦး (Case – 380 နှငျ့ 381) ရှိသဖွငျ့ ….
ယနအေ့ထိ ရောဂါပိုးကငျးစငျလာသူ စုစုပေါငျး (၃၅၁) ဦးရှိပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့အနကျ (၃၄၇) ဦးအား ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ပွုခဲ့ပွီးဖွဈကာ သတျမှတျ နရောမြားတှငျ အသှားအလာဆကျလကျကနျ့သတျ၍ စောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုလကျြရှိပါသညျ။
၅။ (၂၈-၈-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီမှ (၂၉-၈-၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ နလေ့ယျ (၁၂:၀၀) နာရီအတှငျး တှရှေိ့ရသော စောငျ့ကွညျ့လူနာအသဈ (၅၃) ဦးရှိပါသညျ။
စစ်တွေမှ မန္တလေးသိူ့ လာသည့် ရဲအုပ် ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိ
August 27, 2020 by Padaethar
စစ်တွေမှ မန္တလေးသိူ့ လာသည့် ရဲအုပ် ၁ ဦးတွင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ့
ဧရာဝတီ၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်
မန္တလေးမြို့ရှိ ရဲအရာရှိအတက်သင်ကျောင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှလာရောက်ကာ သင်တန်းတက်သည့် ရဲအုပ် ၇ ဦး အနက် ….
စစ်တွေမှ လာသည့် ရဲအုပ် တစ်ဦး တွင် ကိုဗစ်ပေါ့စတစ်တွေ့ရှိ၍ ကန်တော်နဒီဆေးရုံသို့ ယခုညတွင် ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
စဈတှမှေ မန်တလေးသိူ့ လာသညျ့ ရဲအုပျ ၁ ဦးတှငျ ကိုဗဈပိုးတှေ့
ဧရာဝတီ၊ ဩဂုတျ ၂၇ ရကျ
မန်တလေးမွို့ရှိ ရဲအရာရှိအတကျသငျကြောငျးတှငျ ရခိုငျပွညျနယျမှလာရောကျကာ သငျတနျးတကျသညျ့ ရဲအုပျ ၇ ဦး အနကျ ….
စဈတှမှေ လာသညျ့ ရဲအုပျ တဈဦး တှငျ ကိုဗဈပေါ့စတဈတှရှေိ့၍ ကနျတျောနဒီဆေးရုံသို့ ယခုညတှငျ ပို့ဆောငျထားကွောငျး သိရသညျ။
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်သူမှ ဘုရားတည်ရန် အုတ်ရိုးတူးရာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများတွေ့
August 26, 2020 by Padaethar
စစ်ကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ် ဝရာကျေးရွာနေ(၁၇) ကြိမ်မြောက် သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆုပေါက်ခဲ့သူတို့က ဘုရားတည်ရန် အုတ်ရိုးတူးရာမှရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များ သြဂုတ်လ(၂၅)ရက်နေ့လည်ကတူးဖော်တွေ့ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ဝရာကျေးရွာမှာ သမိုင်းဝင်ရွှေမုဌောဘုရားကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ကပ်ရက်မှာ ဘုရားကုန်းကြီးရှိတယ်။သစ်ပင်တွေပေါက်နေတာကြာပြီ။ဦးဇင်းတို့ရွာက ၁၇ ကြိမ်မြောက်မှာ သိန်း၁၅ဝဝဝပေါက်တယ်။
ပေါက်တဲ့ကိုသောင်းထိုက်ဦးတို့၊မဆုမြတ်မော်မောင်နှမတစ်စုကဒီရှေးဟောင်းဘုရားကြီးကိုပြင်မယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်။ဒီဝါတွင်းကိုတော့ အုတ်ရိုးတွေဖော်မယ်ပေါ့။ဝါကျွတ်မှပဲဘုရားတည်မယ်ပေါ့။ဒီနေ့မှာ ဘတ်ဟိုးကော်တယ်။
ဒီနေ့လူတွေနဲ့အုတ်ရိုးတွေတူးရင်းနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိခဲ့တာပါ”ဟု ဦးဇင်း ဦးဝေပုံကမိန့်ကြားသည်။တွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များမှာ ရှေးဟောင်းဘုရားများ၊ကျောက်ဆင်းတုဘုရား၊စာများ၊အိုးများ၊ကြေးဆင်းတုများဖြစ်ပြီး မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်မည်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်စဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ဘုရားတွေကတော့ လက်ကျိုးတာတွေရော၊ခေါင်းပြတ်တာတွေရော ပါတယ်။ စာတွေတော့ ပါတယ်။ တချို့ကတော့ အင်းဝခေတ်ကဟာလို့တော့ပြောတယ်။ သေချာမကြည့်ရသေးဘူး။
အရင်ရွှေမုဌောဘုရားကြီးတုန်းက ငလျင်လှုပ်တုန်းက ဓာတ်တော်တွေ့တယ်၊အဲဒါတွေလည်း ဘုရားထည့်တယ်။အခုတွေ့ဟာကလည်း ဌာပနာထဲထည့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်”ဟု ဆရာတော်ကမိန့်ကြားသည်။
ဓါတ်ပုံ- ဦးဝေ/ မျိုးဝင်းထွန်း (မုံရွာ) Credit to AlinnMyay
သိနျးတဈသောငျးခှဲပေါကျသူမှ ဘုရားတညျရနျ အုတျရိုးတူးရာ ရှေးဟောငျးပစ်စညျးမြားတှေ့
“ဝရာကြေးရှာမှာ သမိုငျးဝငျရှမေုဌောဘုရားကွီးရဲ့မွောကျဘကျကပျရကျမှာ ဘုရားကုနျးကွီးရှိတယျ။သဈပငျတှပေေါကျနတောကွာပွီ။ဦးဇငျးတို့ရှာက ၁၇ ကွိမျမွောကျမှာ သိနျး၁၅ဝဝဝပေါကျတယျ။
ပေါကျတဲ့ကိုသောငျးထိုကျဦးတို့၊မဆုမွတျမျောမောငျနှမတဈစုကဒီရှေးဟောငျးဘုရားကွီးကိုပွငျမယျဆိုပွီး လုပျတယျ။ဒီဝါတှငျးကိုတော့ အုတျရိုးတှဖေျောမယျပေါ့။ဝါကြှတျမှပဲဘုရားတညျမယျပေါ့။ဒီနမှေ့ာ ဘတျဟိုးကျောတယျ။
ဒီနလေူ့တှနေဲ့အုတျရိုးတှတေူးရငျးနဲ့ရှေးဟောငျးပစ်စညျးတှရှေိခဲ့တာပါ”ဟု ဦးဇငျး ဦးဝပေုံကမိနျ့ကွားသညျ။တှရှေိ့ခဲ့သညျ့ ရှေးဟောငျးအမှအေနှဈမြားမှာ ရှေးဟောငျးဘုရားမြား၊ကြောကျဆငျးတုဘုရား၊စာမြား၊အိုးမြား၊ကွေးဆငျးတုမြားဖွဈပွီး မညျသို့စီမံဆောငျရှကျမညျကိုဆှေးနှေးတိုငျပငျစဲဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
“ဘုရားတှကေတော့ လကျကြိုးတာတှရေော၊ခေါငျးပွတျတာတှရေော ပါတယျ။ စာတှတေော့ ပါတယျ။ တခြို့ကတော့ အငျးဝခတျေကဟာလို့တော့ပွောတယျ။ သခြောမကွညျ့ရသေးဘူး။
အရငျရှမေုဌောဘုရားကွီးတုနျးက ငလငျြလှုပျတုနျးက ဓာတျတျောတှတေ့ယျ၊အဲဒါတှလေညျး ဘုရားထညျ့တယျ။အခုတှဟေ့ာကလညျး ဌာပနာထဲထညျ့ဖွဈမယျထငျတယျ”ဟု ဆရာတျောကမိနျ့ကွားသညျ။
ဓါတျပုံ- ဦးဝေ/ မြိုးဝငျးထှနျး (မုံရှာ) Credit to AlinnMyay